Coral, Barxadda Sirdoonka Artifishalka ee Google oo la mid ah RPI | Laga soo bilaabo Linux
Xulka wararka oo dhan | | dhowr
Shaki la’aan mid Mid ka mid ah astaamaha waaweyn ee AI waa inay u oggolaato mashiinnada inay qabtaan dhammaan noocyada hawlaha taas oo markii hore loogu talagalay dadka, marka lagu daro taasi waxay si weyn u caawineysaa otomaatiga geedi socodka badan, hagaajinta shaqooyin badan oo dadka ah. Waxaa laga yaabaa inaad maqashay Coral qalab loogu talagalay waaxda AI kaas oo si xawli ah u koraya.
Taas oo, si loo daboolo baahiyaha jira macaamiisha, Coral waxay bixisaa laba nooc oo ah alaabooyin waaweyn: dardar galiyayaasha iyo looxyada hormarinta ee loogu talagalay noocyada cusub ee fikradaha iyo qaababka lagu xoojiyo maskaxda caqliga macmalka ah ee aaladaha wax soo saarka sida kamaradaha casriga ah iyo dareemayaasha.
Labada xaaladoodba, wadnaha qalabka waa Google's TPU Edge, guntin ASIC ah oo loogu talagalay inay ku shaqeyso algorithms-ka barashada mashiinka miisaanka fudud, oo ah nooc yar oo ka mid ah TPU-da la qaboojiyey ee loo adeegsaday server-yada daruuraha Google.
Qalabka Coral USB Accelerator wuxuu leeyahay jab elektaroonig ah in loo adeegsaday daaweynta sirdoonka macmalka ah lagu sameeyo gudaha. Loogu talagalay sidii qaab aad u fudud oo la isku xidhi karo, Coral USB Accelerator module waxay siisaa Raspberry Pi nanocomputer dhammaan sirdoonka Edge TPU wareegga isku dhafan.
Iyada oo awood u leh inay ku shaqeyso shabakadaha neerfaha ee RPi lafteeda, waxaad si deg deg ah oo hufan ugu dhex dari kartaa awoodaha sirdoonka macmalka ah mashaariicdaada, adigoo ilaalinaya sirta xogtaada.
Si loo abuuro shabakadahaaga neerfaha oo ay u hoggaansamaan nidaamka waxbarashada, kuwa horumariya hayso TensorFlow. Markaa waa inay ku soo ururiyaan oo ay ku ordaan kaararka Edge TPU iyagoo isticmaalaya barnaamijka la siiyay. Marka shabakadda la soo ururiyey la rakibo, dhammaan xisaabinta waxaa lagu sameeyaa gudaha wareegga Edge TPU, adigoon xogta u dirin daruurta. Dib u dhac kasta oo daruur ah ayaa la tirtiraa, waxqabadka ayaa hagaagaya, iyo xogta isticmaalaha ayaa lagu hayaa gudaha iyada oo la xakameynayo
Sida Intel Movidius Neural Compute Stick oo la sii daayay in ka badan sanad ka hor, Coral USB Accelerator wuxuu ku darayaa ASIC-gaaga caadada kuu ah qaab ah qalab si fudud loo isticmaalo oo aad ugu eg flash disk. Si kastaba ha noqotee, marka la isbarbardhigayo labada dhinac dhinac, waxaa jira kala duwanaansho muuqda.
Xusuusta Coral Dev waxay ka kooban tahay kaar saldhig leh xiriiro:
Muuqaalka muuqaalka DSI
MIPI-CSI interface interface
3,5mm jaakada maqalka
4mm 2,54-pin terminal loogu talagalay dadka ku hadla qalabka hadalka
Isku xira HDMI 2.0 oo buuxa
Laba mikrofoonada PDM ee dhijitaalka ah iyo madaxa 40-pin GPIO.
Waxaa ku lifaaqan kaarka salka nidaamka 40x48mm moduleka laga saari karo (SoM) lagu dhisay agagaaraha processor-ka NXP i.MX 8M iyo TPU Edge lafteeda. SoM waxay leedahay coprocessor-ka loo yaqaan 'cryptographic coprocessor', oo lagu dhisay Wi-Fi, iyo taageerada Bluetooth 4.1, iyo waliba 1GB oo ah LPDDR4 RAM iyo 8GB oo ah eMMC.
Dhinaca kale Coral, wuxuu leeyahay nidaam u gaar ah oo ah Linux Mendel in wuxuu ku dhismaa aasaaska Debian waana mid si buuxda ula jaan qaadi karta bakhaarrada mashruucan (maadaama ay isticmaasho xirmooyinka binary ee aan wax laga beddelin iyo cusboonaysiinta ka timaadda meelaha waaweyn ee Debian).
Barxadda Coral sidoo kale waxaa ku jira noocyo moodooyin diyaar ah (horay-u-sii-baro oo horay u baro), oo loogu talagalay Edge TPU chip electronic. Moodooyinkan dabacsan ayaa ka dhigaya barnaamijka mid fudud oo la jaan qaada barnaamijyadaada.
Halka qalabka ay isticmaali karaan injineerada si ay u abuuraan mashaariic, Coral waxay bixisaa hagitaano oo ku saabsan sida loo dhiso mashiinka kala sooca marshmallow iyo quudiyaha caqliga leh ee shimbiraha, tusaale ahaan.
Marka lagu daro ujeeddada muddada-dheer ee saxanka, waa inay ujeedkeedu tahay u adeegsiga macaamiisha shirkadaha ee warshadaha sida baabuurta iyo adduunka caafimaadka.
In kastoo Coral wuxuu bartilmaameedsanayaa adduunka shirkadaha, Mashruucu wuxuu xididdigiis ku leeyahay Google qalabkeeda wax lagu barto ee "AIY".
Waxaa lagu sii daayay 2017 oo ay ku shaqeynayaan kumbuyuutarrada loo yaqaan 'Raspberry Pi', xirmooyinka AIY waxay u oggolaanayaan qof walba inuu dhisto afkiisa ku hadla smart iyo kaamirooyinka waana ku guuleystey soosaarayaasha 'STEM' iyo suuqyada toy-da
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » dhowr » Coral, Barxadda Sirdoonka Artificial ee Google ee la midka ah RPI